निराश ग्रिजम्यान मड्रिड छोड्ने दाउमा !! बार्सिलोनाले सम्झौता नगर्ने, पीएसजीले २०० मिलियन दिने !! - Experience Best News from Nepal
एन्टोइन ग्रिजम्यान आफ्नो आबर्द क्लब एथलेटिको मड्रिडमा निराश देखिएका छन्, उनले यसै सिजन युभेन्ट्ससंग को हार पश्चात क्लब छाड्ने निर्णयमा पुगेको समाचार बाहिरिएको छ। क्लब छाडे संगै उनको नजर यूरोपको ठुला क्लबमा ठोकिएको छ जससंगै उनले बार्सिलोना जाने सोच बनाएका छन् तर बार्सिलोनाले उनलाई भित्र्याउन नचाहेको बार्सिलोनाले espn लाई बताएको छ।
२८ बर्षे ग्रिजम्यानले क्लबमा निकै सकस अनुभब गरिसकेका छन् भने बार्सिलोनाले ग्रिजम्यान आफ्नो चाहना अनुरुपका अट्याकर नरहेको दाबी गरेको छ। बार्सिलोनाले ३२ लुइज स्वरेजको विकल्पमा नया अट्याकर हेर्दै छ। बार्सिलोनाले ग्रिजम्यानमा चाहना नराखेको समाचार बाहिरिएको छ।
बार्सिलोनाले दुई अट्याकर फ्र्यांकफुर्टबाट लुका जोभिच र सेल्टा भिगो मार्फत मेक्सि गोमेजमा नजर लगाएको छ। ग्रिजम्यान हाल मड्रिडमा २४ मिलियन पारिश्रमिक लिने गर्दछन र बार्सिलोनाको हकमा क्लबले उक्त पारिश्रमिक दिन नसक्ने समेत बताएको छ।
उनको सम्भावना पीएसजी भने हुन सक्छ। विभिन्न अफबाह संजालमा फैलिदा ग्रिज्म्यानलाई २०० मिलियन पीएसजीले खर्चिन सक्ने पाइएको छ।
ओल्ड ट्राफर्डमा मेस्सी रोक्ने युनाइटेडको डिफेन्स योजना
बार्सिलोनाले तोक्यो काउटिन्होको मूल्य, किनेकाे मूल्य भन्दा ७० मिलियन कम !
दुवै खेल सनसनीपूर्ण : बार्सिलोनाको कठिन जित, युभेन्ट्सको कठिन ड्रमा रोनाल्डोको गोल
मेस्सी, नेय्मार, स्वारेज र ग्रिजम्यानको अट्याक निकै शानदार हुनेछ: रिभाल्डो
मेस्सी मेरो सधै अभिभावक : नेमार